एमाले महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे !
November 11, 2021 N88LeaveaComment on एमाले महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवशेनले छपक्कै छोपेको छ । महाधिवेशन बाट नेतृत्वमा स्थापित हुन चाहनेहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली पक्का जस्तै देखिएका छन् । अध्यक्ष पछिको सबैभन्दा कार्यकारी पद महासचिव को भन्ने चासो पनि एमालेजनमा देखिएको छ । नेतृत्वको लागी खुलेर क्याम्पेनीङ धेरैले नगरे पनि […]
के लिभिङ टुगेदरबाट जन्मिएको बच्चाले अंश पाउँछ ? के छ नेपालमा कानुनी व्यवस्था ?
November 11, 2021 November 11, 2021 N88LeaveaComment on के लिभिङ टुगेदरबाट जन्मिएको बच्चाले अंश पाउँछ ? के छ नेपालमा कानुनी व्यवस्था ?
आवेश अधिकारी नेपालमा विवाहलाई धार्मिक र संस्कृतिक रुपमा बिशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । हाम्रो समाजमा विवाह एउटा यस्तो बन्धन हो जसले विशेष किसिमको सामाजिक सम्बन्धहरुको स्थापना गर्दछ । युगौंदेखि चलिआएको सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई विवाह र विवाह संग जोडिएको रिति रिवाजहरुले जीवन्त राख्‍न समेत महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाम्रो समाजमा विवाह बिभिन्‍न […]
गृह जिल्ला पुगेर भाषण ठाेक्दा विवादमा तानिए श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, के थियाे अभिव्यक्ति ?
November 11, 2021 N88LeaveaComment on गृह जिल्ला पुगेर भाषण ठाेक्दा विवादमा तानिए श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, के थियाे अभिव्यक्ति ?
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) विवादमा तानिएका छन् । उनले गृहजिल्ला तनहुँमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै मधेसी समुदायप्रति लक्ष्य गरेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । बहालवाला मन्त्रीले विवादास्पद […]
प्रचण्ड यसरी शक्तिशाली बन्दै
November 11, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड यसरी शक्तिशाली बन्दै
काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्ति सञ्चय बढाउँदै लगेका छन् । उनी झन् झन् शक्तिशाली बन्दैछन् । प्रचण्डले माओवादीलाई सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिलाउन सकेका छन् । अर्थ र ऊर्जा जस्ता मन्त्रालय माओवादीले चलाइरहेको छ । सरकारमा पनि माओवादीको बलियो प्रभाव देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका कतिपय […]
एमालेका नेता खगराज अधिकारीको भाषण बन्यो भाइरल
November 11, 2021 N88LeaveaComment on एमालेका नेता खगराज अधिकारीको भाषण बन्यो भाइरल
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गरेको भाषण भाइरल बनेको छ । उनले वर्तमान सरकार असंवैधानिक बाटोतर्फ हिँडिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘परमादेशबाट बनेको सरकार हो, यो सरकारले संवैधानिक काम गर्छ भन्ने तपाईँहरुलाई विश्वास लाग्छ र ? सरकार त अहिले उल्टो […]
भीम रावललाई दश भाइले देलान त मत ? यस्तो भन्छन् नेताहरु
November 11, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावललाई दश भाइले देलान त मत ? यस्तो भन्छन् नेताहरु
काठमाडौं । भिम रावलजस्तै एमाले विभाजनको अन्तिम घडीमा माधव नेपालको साथ छाडेका नेताहरुले अहिलेसम्म रावलले अध्यक्ष उठ्नेबारे छलफल नगरेको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म त्यसबारेमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे। महाधिवेशनमा ओलीबाहेक अरुको अध्यक्षमा उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना पनि निकै कम रहेको उनले बताए। ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षको निर्वाचन […]
सरकारले गरिबका नाममा पैसा बाँड्ने प्रक्रिया थाल्याे, यसरी दिनुहाेस् निवेदन !
November 11, 2021 November 11, 2021 N88LeaveaComment on सरकारले गरिबका नाममा पैसा बाँड्ने प्रक्रिया थाल्याे, यसरी दिनुहाेस् निवेदन !
काठमाडाैं । कोभिड-१९ को महामारीको समयमा रोजगारी गुमाएका अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने प्रक्रिया शुरू भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी अति विपन्न परिवारलाई राहत दिने प्रक्रिया थालेको हो। यसका लागि १५ दिनभित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। यसमा रोजगारी गुमाएका कुनै पनि परिवारले निवेदन दिन […]
एमालेले महाधिवेशनमा बोलायो चीन-भियतनाम-उत्तर कोरियादेखि विश्वका ६२ दलका विशिष्ट अतिथि
November 11, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले महाधिवेशनमा बोलायो चीन-भियतनाम-उत्तर कोरियादेखि विश्वका ६२ दलका विशिष्ट अतिथि
काठमाडौं । नेकपा एमालेको मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न मुलुकका ६२ दलका विशिष्ट अतिथिलाई निम्त्याएको छ। भव्य रुपमा महाधिवेशन गर्ने योजनामा रहेको एमालेले चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, लाओस र क्युबा जस्ता कम्युनिस्ट मुलुकबाट उच्च तहका नेताहरु उपस्थित हुने अपेक्षा गरेको छ। भदौ १ गते एमालेले विभाजित भएपछि गर्न लागेको महाधिवेशनमा […]
आखिर किन गुमनाम हुँदै छन् वामदेव गौतम ?
November 11, 2021 N88LeaveaComment on आखिर किन गुमनाम हुँदै छन् वामदेव गौतम ?
काठमाडौं । एकताको जिम्मा मलाई दिनुस्, तपाईं र माधव नेपाललाई समेत मान्य हुनेगरी पार्टी एकता गर्छु, पार्टीलाई फेरि पुरानै अवस्थामै फर्काउँछु । आजको भोलि नै त भन्दिनँ, केही दिनमा दुवैलाई मिल्नेगरी पार्टी एकता गर्छु ।’ माथिको भनाइ तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको हो । १८–असार २०७८ मा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रहेका गौतमले एमालेको बैठकमा बोलेका हुन् […]